Mayelana NATHI - Wanhe Industry and Trade Co., Ltd.
I-Wanhe Grass ingumkhiqizo we-Intanethi wobuchwepheshe obudidiyela ohlanganisa i-R & D, ukukhiqiza nokuthengisa futhi uzibophezele ekubeni ngumhlinzeki wesevisi omuhle kakhulu womkhiqizo nokwenziwa emkhakheni wotshani bokuzenzela.
IHuai'an Wanhe Industry and Trade Co, Ltd. itholakala eBhange laseBeijing-Hangzhou Grand Canal enezindawo ezinhle. Idolobha lakubo laseZhou Enlai, indoda enkulu yesizukulwane, iDolobha laseHuai'an, esifundazweni saseJiangsu. I-Xinchang Railway neBeijing-Shanghai Expressway badlula edolobheni ngokuhamba okulula. Imikhiqizo eyinhloko ngotshani bezemidlalo kanye ne-landscape grass neminye imikhiqizo ngefektri yethu. Sisungule ubudlelwano bokubambisana besikhathi eside futhi obuzinzile nabathengisi abaningi nama-ejenti kule minyaka engama-20 edlule Ukuthunyelwa kwamanye amazwe kube ngaphezu kokuthengisa okungu-80%.
U-Wanhe unobuchwepheshe obukhulile nemishini yokukhiqiza ephelele.
I-workshop ngayinye ifakwe igumbi lokuhlola inqubo, imishini ephelele yokuhlola njll., Imishini yaklanywa unjiniyela wethu noma ukungenisa kusuka kwelinye izwe. Yonke intambo yokukhiqiza ingenza ngaphezu kwengu-1500 square meter utshani bokufakelwa nsuku zonke. Kunganelisa wonke amakhasimende 'ikhwalithi nobungako obudingekayo.
I-Wanhe Grass Inamathela Njalo Kumqondo Wokuthuthukiswa Kwezesayensi
Ubuchwepheshe Nokuthuthukiswa Kwamathalente Njengenjongo Yokuthuthukisa Inkampani
Kusukela yasungulwa, lo mkhiqizo ubulokhu uhambisana nomqondo wesayensi wentuthuko, futhi wenze ucwaningo lobuchwepheshe nentuthuko kanye nabasebenzi beqeqesha izinjongo zentuthuko yenkampani. Sekusungulwe umnyango okhethekile wezobuchwepheshe nentuthuko, futhi kusungulwa ithimba lobuchwepheshe be-R & D elineziqu eziphakeme ezifundweni kanye nekhono eliqinile lokusungula izinto ezintsha. Umkhiqizo ubheka ukunxenxa nokutshalwa kwamathalente, futhi uqasha abasebenzi be-R & D bezobuchwepheshe isikhathi eside ukucebisa ngokuqhubekayo ithimba le-R & D. Ngasikhathi sinye, inkampani izohlinzeka njalo ngoqeqesho lobuchwepheshe kubantu abakhona, futhi izophinde ihlele ukubheka nokufunda kwezinye izinkampani, futhi iqhubeke ithuthukise ulwazi lobuchwepheshe kanye nekhono elisha labasebenzi be-R & D.
Umkhiqizo ubuye ubaluleke kakhulu ocwaningweni nasekuthuthukisweni kwemikhiqizo emisha. Minyaka yonke, itshale imali eningi ocwaningweni nasekuthuthukisweni kwemikhiqizo emisha, futhi izuze imiphumela emihle. Phakathi kwazo, kutholakale izitifiketi ezintathu zobunikazi, futhi izinhlobo ezahlukahlukene zenzelwe imikhakha ehlukahlukene yohlelo lokusebenza. Emsebenzini wokuthuthukiswa komkhiqizo omusha, lo mkhiqizo uqinisa ukushintshana nokubambisana nezikhungo zocwaningo lwasekhaya ngokusho kwentuthuko yezobuchwepheshe kanye nokufunwa kwezimakethe, futhi ngokwethulwa kwesayensi nentuthuko yokubambisana, imiphumela yocwaningo lwesayensi iguqulwa ibe ngumkhiqizo ngokushesha okukhulu, kudale inzuzo kumabhizinisi .
IHuai'an Wanhe Industry and Trade Co, Ltd. itholakala eBhange laseBeijing-Hangzhou Grand Canal enezindawo ezinhle. Idolobha lakubo laseZhou Enlai, indoda enkulu yesizukulwane, iDolobha laseHuai'an, esifundazweni saseJiangsu. I-Xinchang Railway neBeijing-Shanghai Expressway badlula edolobheni ngokuhamba okulula. Imikhiqizo eyinhloko ngotshani bezemidlalo ne-landscape grass kanye neminye imikhiqizo ngefektri yethu. Sisungule ubudlelwano bokusebenzisana besikhathi eside futhi obuzinzile nabathengisi abaningi nama-ejenti kule minyaka engama-20 edlule Ukuthunyelwa kwamanye amazwe kube ngaphezu kwe-80% yokuthengisa okuphelele.Ukuze sihlangabezane nezidingo ezahlukahlukene zabasebenzisi, sinikezela nensizakalo ye-OEM ne-ODM.
Inkampani yethu ikhiqiza futhi ithengise zonke izinhlobo zemikhiqizo yezemidlalo ekhethekile nemikhiqizo yokwakheka komhlaba, ethole udumo kumakhasimende ezweni lonke iminyaka eminingi. Dala inani lamakhasimende ngokuhlakanipha kwethu nangomjuluko wethu. "IHarmony iyigugu kakhulu futhi isekelwe okholweni" yinkolelo yabo bonke abantu abayizinkulungwane eziyishumi. Kufanele sihambisane nomoya webhizinisi "wokwethembeka, ubugagu, ukwenziwa kwezinto ezintsha nentuthuko" futhi senze iminikelo ethe xaxa emfundweni.
Njalo ngonyaka sibamba iqhaza emibonisweni eminingana yasekhaya neyangaphandle, ngasikhathi sinye vakashela amakhasimende futhi baxoxisane ngebhizinisi.
Sizoletha insizakalo enhle kakhulu ngokuya ngezidingo zekhasimende ngalinye.
Ukuhlangabezana nezidingo ezahlukahlukene zomsebenzisi, i-Wanhe Grass inikezela ngezinsizakalo ezisezingeni eliphakeme ze-OEM / ODM zokucubungula izinkampani zomhlaba, ezithathwa njengenye yezinsizakalo ezisemqoka zenkampani yentuthuko yesikhathi eside. Yonke imfuneko ye-OEM / ODM ibhekene nethimba elizinikele lokuthuthukiswa komkhiqizo nokulawulwa. Isiqinisekiso kumamodeli wesiko, imingcele, amalebula, izincwajana, ukupakisha, njll, nokulawulwa kwekhwalithi ngokuhlolwa kwekhwalithi okuqinile ngokuya kwesicelo sakho. Sizokwenza ngenhliziyo yonke ngokuya ngezidingo zamakhasimende ukuhlinzeka ngekhwalithi esezingeni lokuqala kanye nensizakalo, sikusize udale umkhiqizo wakho kalula.
Isithembiso esibalulekile: yonke imikhiqizo ikhethwa ngunjiniyela ochwepheshe. Ama-invoyisi ahlelekile aqinisekisa amalungelo wokuthenga nokusebenzisa.
Izimpahla ezithengwe kuwebhusayithi esemthethweni kanye nesitolo esihamba phambili ziyathunyelwa zisuka lapho kugcinwa khona inkampani. (Ngaphandle kwemikhiqizo ekhethekile)
Okujwayelekile: Ukuthunyelwa ngomhlaba, umoya kanye nesikebhe (Sicela uphawule uma unesidingo esikhethekile)
Impendulo yangemva kokuthengisa
Ukuqinisekisa ukuthi ukulandelwa kwayo yonke ikhwalithi nempendulo yomkhiqizo kungaxazululwa ngesikhathi, ukufeza ukuxhumana okusebenza kahle nawe, ngakho-ke kungcono ukunikela ngenombolo yenkontileka engalandelwa kuyo yonke idatha lapho kwenziwa.
Utshani Bokubeka Indawo Ngokuhleleka Kwendawo, Utshani Begalofu Lokufakelwa, Ibhola le-Turf Grass, Inkundla yebhola lezinyawo i-Astro Turf, Mbumbulu Utshani Carpet, Utshani Lokuzenzela,